Sida uu dagaalka u dhaxeeya Sacuudiga iyo Qadar u saameeyay Horyaalka Ingiriiska - BBC News Somali
Sida uu dagaalka u dhaxeeya Sacuudiga iyo Qadar u saameeyay Horyaalka Ingiriiska
19 Sebtembar 2019
Image caption Loollanka dhinaca awoodda ee Bariga Dhexe ayaa saameyn ku yeeshay habsami u socodka ciyaaraha horyaalka Ingiriiska ee Premier League-ga
Madaxda maamulka dhinaca Ciyaaraha - oo ay ka mid yihiin kuwa horyaalka Ingiriiska ee Premier League-ga ayaa ka dalbaday howlwadeennada qalabka satellite-ka ee dalka Sacuudiga inay joojiyaan "falka burcadnimada ah ee lagu xadayo baahinta ciyaaraha", xilli uu taagan yahay khilaaf diblomaasiyadeed oo u dhaxeeya waddamada Qadar iyo Sacuudiga, kaasoo hadda lugaha la galay habsami u socodka tartamada ciyaaraha ee ugu waaweyn adduunka.
Maxaa dhacaya, maxayse tahay sababtu?
Yaa door ka ciyaaraya arrintan?
Horyaalka Ingiriiska ee Premier League-ka - iyo waliba tartammo kale oo badan, oo ay ku jiraan Koobka Adduunka ee Fifa, Uefa Champions League-ga iyo Wimbledon-ka - ayaa si wada jir ah u iibiya xuquuqda baahinta dhinaca Telefishinka ee ciyaaraha ka tirsan tartamadaas, waxayna siiyaan satelliteiyo kala duwan oo ku yala yaalla caalamka.
Xuquuqda ciyaarahan looga baahinayo inta badan dalalka ku yaalla bariga dhexe waxaa iska leh shirkad laga leeyahay waddanka Qadar oo la yiraahdo beIN Sports, taasoo hoos tagta telefishinka caanka ah ee Al Jazeera, oo xaruntiisa ugu weyn ay ku taallo magaalada Dooxa.
Sacuudiga oo tarxiilay geela Qadar
Qadar ma u liicday labadii sano ee go'doominta lagu hayay?
Laakiin shirkad wax baahisa oo si gaar ah loo leeyahay, oo lagu magacaabo beoutQ, ayaa muuqaallada ka qaadaneysa beIN Sports, iyadoo astaanteeda gaarka ah ku xardheysa isla markaana cod u yeeleysa, ka dibna ka iibineysa shirkado kale, oo badankood ay ka howl galaan Sacuudi Carabiya iyo waddamada kale ee Carabta.
In sidaas la sameeyo waxay dabcan hoos u dhac u keeneysaa dhaqaalaha shirkadda beIN uga soo xarooda baahinta muuqaallada, maadaama macaamiil badan oo dalalka carabta ku sugan aysan u baahneyn inay u daba fariistaan daawashada ciyaarahaas.
Warbixin laga soo saaray baaritaan uu sameeyay guddiga ugu weyn dhinaca maamulka ciyaaraha ee MarkMonitor ayaa lagu xaqiijiyay in shirkadda beoutQ ay "si aysan su'aal ka taagneyn" iskeed ugu baahiso ciyaarahaas, waxaana la arkay iyadoo qaab xatooyo ah muuqalaladan uga qaadaneysa hawada, ayna isticmaashay satellite-ka laga leeyahay waddanka Sacuudiga ee lagu magacaabo Arabsat.
Hase yeeshee Arabsat ayaa sheegtay inaysan waxba ka ogeyn arrintan
Maxay horyaalladu u caroodeen?
Lahaanshaha sawirka ESA
Image caption Arabsat waxaa la hirgaliyay bishii July ee sanadkii 2008
Hal eray markii lagu soo koobo jawaabtaas waa - Lacag.
Horyaallada waaweyn iyo tartammada waa kuwo ay ku xiran yihiin dad aad u badan. ciyaaraha ay kooxaha waaweyn isaga hor yimaadaan ayaana sababta ugu weyn ah. Sidaas awgeed, shirkadaha satellite-ka wax ku baahiya waxay sii deynta ciyaarahaas ku bixiyaan lacago farobadan - oo malaayiin ama xitaa balaayiin doolar ah - ka dibna waxay lacagtooda dib uga soo ceshtaan macaamiisha guryaha ku daawada oo ay khadkooda u xiriiriyaan.
Dhaqaalahan faraha badan ayaa horyaalka Premier League-ga ee dalka Ingiriiska ka dhigay kan ugu weyn uguna lacagta badan adduunka oo dhan.
Shirkadda beIN iyaduna waxay ka mid tahay kuwa ugu waaweyn ee lacagtaas bixiya.
Laakiin haddii ay shirkad si bilaash ah ku hesho adeegga ay shirkado kale ku bixiyaan lacagaas badan, dhammaan macaamiishu waxay u wareegayaan shirkaddaas, oo dacan qiimaheeda uu jabnaanayo.
Haddii ay sidaas dhacdana waxaa hoos u dhacaya dhaqaalaha ay heli jireen shirkadaha horyaallada kasoo iibsan jiray xuquuqda baahinta, ka dibna waxaa hubaal ah in horyaallada dhaqaalahooda uu hoos u dhacayo, taasi ayaana ah sababta ka careysiineysa hadda.
Maxaa Arrintan ka khuseeya Saudi Carabia?
Image caption Shirkadda BeIN Sport waxay horaantii sanadkan joojisay baahinta ciyaaraha F1, waxayna ku andacootay inay tallaabadaas u qaadday sababo la xiriira xatooyada lagu sameeyay
Shirkadda beoutQ waxay go'aan ku gaartay inay ka careysiiso Qadar - Markii ay socden ciyaarihii adduunka ee sanadkii 2018-kii, waxay shirkaddan baahinta ay xadday codka lagu tabinayay u adeegsatay mid u eg saxafi caan ah oo u dhashay waddanka Sacuudiga, laakiin waxay siisay magaca siyaasi mucaarad ah oo u dhashay dalka Qadar.
Waxay sidoo kale muuqaallada kusoo dartay xayeysiimo lagu bahdilayo dowladda Qadar iyo Shirakaddeeda diyaaradaha.
Sida aan horayba u sheegnay, marka ay shirkaddan adeeggii ay beIN Sport macaamiisha ka iibineysay ku bixiso si bilaash ah, wuxuu dhaawac gaarayaa dhaqaalaha Qadar.
Balse Sacuudiga ayaa sanadkii 2017-kii waddankiisa ka mamnuucay shirkadda laga leeyahay Qadar ee beIN Sport, tallaabadaasna waxay qeyb ka ahayd dagaalka diblomaasiyadeed ee ka dhex qarxay Sacuudiga iyo Qadar ka dib markii ay Riyaad ku eedeysay Dooxa inay taageerto kooxaha argagixisada.
Qadar ayaa beenisay inay garab istaagto ururrada argagixisada ah.
Mas'uuliyiinta Sacuudigu waxay sidoo kale beIN Sports ku eedeeyeen inay ganacsi kaligeed ku kooban ka waddo gobolka - inkastoo eedeymahaa ay shirkaddu ku qeexday kuwo la siyaasadeeyay.